စိတ်ကူးယဉ်အိပ်မက်: January 2010
ဆည်းဆာတောက်ချိန် နေညိုချိန်မှာ ပစ်ပြေးရက်တယ်
ညခင်းမှာ လမင်းရဲ့ မှုန်ပျပျအလင်းစက်အောက်
နင့်ရဲ့ နွေးထွေးတဲ့အနမ်းတွေကို တမ်းတနေရင်း
(၁၆-၁-၂၀၁၀။ ၅း၁၀ pm)
at 2:05 AM Labels: ကဗျာ၊ အတွေးပုံရိပ်
အညွှန်း ထက်ပိုသောက်ခဲ့မိလို့ . .
အချစ် အဆိပ်တွေတက်ခဲ့ပေါ့ . .
ဟုတ်ရဲ့လား . . .
တွေးကြည့်တော့ ပေါ့ပါးလိုက်တဲ့. . “အချစ်“
လက်တွေ့ကတော့ ရင်မောရတဲ့ . .“အဖြစ်“
မဆုံနိုင်မှန်း သိနေမှတော့ . .
ကြုံနေတုန်း “ခဏ“ တာလေးမှာ
ဘာကြောင့် . . .
ဝေဒနာတွေပေးနေကြဦးမှာလည်း . . .
at 12:18 AM Labels: ကဗျာ၊ အငှားရင်ခုန်သံ
ခြေက ဖွားခဲ့ရတဲ့ သားလေ
အိပ်မက်ထဲ ပိုင်ခွင့်မရသေးဘူး အမေ
ဒါပေမဲ့ အမေ့ရဲ့အချစ် စာကညစ်ပေါ်မှာ ထုတ်ဖတ်ခွင့်ရတော့မှပဲ
အားရအောင် ငိုခဲ့မိတယ် အမေ
အသည်းနှလုံး ကြိမ်မီးအုံးသလို ခံစား
အရက်အိုးထဲ ခေါင်းစိုက်မိခဲ့တယ် အမေ
အခုအချိန်အထိတော့ အိပ်မက်တွေ ဗလာကျင်း
လက်တွေ့မှာ ရှိသမျှ ချရင်းခဲ့ရတဲ့
ရေရွတ်မိတဲ့ အမေ့ကို တမိတဲ့စကားတွေကလဲ
အိပ်ပေါက်နဲ့ အိပ်မက်အသေတွေ လိုက်ကောက်နေမိတုန်းပဲ…
(၉-၁-၂၀၁၀၊ ၁၂း၀၀ pm)
at 9:07 AM Labels: ကဗျာ၊ စိတ်ထွက်ပေါက်